Ujeedada uu Daarnaa Kulan Qaddo Sharaf ah Oo Masuuliyinta Xukuumadu u qabatay Dhalinyarada Ciyaaraha Ceelafweyn | Dhaymoole News
Ujeedada uu Daarnaa Kulan Qaddo Sharaf ah Oo Masuuliyinta Xukuumadu u qabatay Dhalinyarada Ciyaaraha Ceelafweyn
Ceelafweyn(dhaymoole) Dhalinyarada bahda ciyaaraha Degmada Ceelafweyn Oo wasaarada cayaaraha somaliland dhawaan ufurtay koobka is dhex galka dhalinyarada , ayaa kadib markii tartan ciyaareedka kooxahaasi dhex maray soo dhamaaday .
Waxa munaasibad balaadhan oo Qado sharaf ah ku maamuusay Wasiirka Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Somaliland iyo Wasiirka Wasaaradaha Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kaluumaysiga .
Waxana Munaasibadaasi Kasoo Maamulka Degmada ,Xildhbaanada Golaha Degaanka ,Xildhibaano ka Tirsan Golaha Wakiilada ,Masuuliyiin Xilal hore uga soo qabtay Xukuumadihii kala dambeeyay maamulka Wasaarada Ciyaaraha ee Degmada iyo Marti sharaf kale .
Dhaamaanba Masuuliyiinta Munaasibadani Kasoo Qayb Galay Waxay Hogo Tusaaleeyeen Qiimaha Kulankan balaadhan ee dhalinyarada labada dhinacba ay isugu yimaadeen .
Waxayna intaasi sii raaciyeen in kulankani ahmiyad weyn ugu fadhiyo Adkaynta iyo dib usoo celinta Nabad Galyadii Deegaankani ka jirtey ee lagu gudo jiro sidii Hawshaasi loo soo dhamaystiri lahaa .
Wasiirada Wasaaradaha Dhalinyarada Iyo Ciyaaraha Somaliland Boos Mirre Maxamed iyo Wasiirka Wasaaradaha Xanaanada Xoolaha iyo Horumarinta Kaluumaysiga Xassan Maxamed Cali (Gaafaadhi ) oo isga kala dambeeyay ka hadalka munaasibadan Qaddo sharafta ah ee ay u qabteen dhalinyarada ukala safta kooxaha kubada cagta ee Deg Ceelafweyn.
Waxayn tilmaameen in isu imaatinkan dhalinyaradu ahmiyad buuxda ugu fadhiyo Nabadda Deegaankan .
Isla markaasina kulankan quruxda badani uu qayb ka yahay dedaalkii Qoorweynta Somaliland oo dhami ku doonaysay in meel adag lagu xidho adkaynta Nabad galyada iyo dib usoo nooleynta Isku xidhnaanshihii Bulshada shaydaanku kala irdheeyay ee Deegaanka Ceelafweyn.
Waxayna Wasiiradu Madashii kulanka Dhalinyarada Ka Sheegeen In Ka Xukuumad ahaan ay diyaar ula yihiin wax kasta oo kobcinaya garaadka dooniseed ee ku abuuran jiilkan cusub isla markaasina Farxad iyo yididiilo buuxdaba Gelinaya .
Waxana Wasiir Boos Mirre Maxamed Halkaasi Ka Sheegay Inay ka wasaarad ahaan Xilweyn iska saari doonaan sidii ay Degmada Ceelafweyn Uyeelan lahayd Garoonka Rooga Cagaaran ee Magaalooyinka Kale ee Dalkuba leeyihiin qorshaha horumarinta wasaaradana ay ugu dari lahaayeen in Garoonkaasi loo dhiso Degmada Ceelafweyn .
Halka taasi dhigeedana Wasiirka Wasaarada Xanaanada Xoolaha Iyo Horumarinta Kaluumaysiga Somaliland Md Xassan Maxamed Cali (Gaafaadhi) uu dhalinyaradani Ku dhiiri geliyay inay kobciyaan oo kordhiyaan Waxbarashada kala gedisan isagoona intaasi raaciyay in dhalinyaradani loo qaadi doono Gobolada kale ee Dalka si markaasi ay usoo arkaan qaabka ,anshaxa iyo asluubta suuban ee dhalinta dhigooda ahi leedahay iyo waxay kaga duwan yihiin .
Gebo-gabadii Waxay Wasiiradu Mahadnaq Balaadhan usoo Jeediyeen Siyaasi Maxamuud Raage Ibraahin Oo isku Soo Abaabulay isla Markaasina Kasoo Sheqeeyay in Qaabkan Dhalinyaradu isugu timaado markan , iyadoona Masuuliyinta Ciyaaraha Ee Degmaduna ay goobtaasi kaga Markhaati Keceen In Wakhtiyadii Dagaalada Bulshada Degel iyo Ood-wadaagta ahi soconayeen aanay bahda kubada cagta degmadu aany ku milmin arimahaasi Dagaalka iyo wax ku taxa luqa toona ,oo markaasi mar kasta isku xidhnaayeen .